Coral Reef: စကားဦး
mAy mAdi said on December 7, 2009 at 8:56 AM
hey... keep it up.... wait for bonus and buyanew laptop :) i will always support you ...
Saw Su said on December 7, 2009 at 1:06 PM
keep it up...i'll be ur regular reader :)
ဇွန်မိုးစက် said on December 7, 2009 at 7:14 PM
guys...thank you so much. i'm surprised that i haven't finished writing and already received comments from you. i'll try my best to finishapost soon. thanks again!:)
Aung M said on December 8, 2009 at 10:44 AM
ဇွန်မိုးစက် ဆိုတဲ့ နာမည် သိပ်မ်ိုက်တယ်နော် အားပေးလျက်ပါဗျာ
khin oo may said on December 8, 2009 at 9:08 PM
ဇွန်မိုးစက် said on December 8, 2009 at 11:02 PM
ကျေးဇူးပါ Aung M နဲ့ မမ ခင်ဦးမေ
sonata-cantata said on December 24, 2009 at 8:47 AM
Eighteen April said on December 28, 2009 at 3:51 PM
အားပေးတယ် အစ်မရေ ...
တကယ်ကို ကောင်းမွန်တဲ့ Blog လေးတစ်ခုပါ . .
နောက်ဆို အစ်မဆီက သင်ယူရတော့ မယ်ထင်တယ်
ညီလင်းသစ် said on October 24, 2012 at 5:33 PM
ကွန်ပြူတာတောင် မရှိသေးဘဲနဲ့ လုပ်လိုက်တဲ့ ဘလော့ဂ်လေးက အခုလို ၃ နှစ်နီးပါး ရောက်လာ ခဲ့လိမ့်မယ်လို့ အဲဒီတုန်းကတော့ တွေးမိခဲ့မယ် မထင်ပါဘူး၊ ဇွန့်ရဲ့ ပထမဦးဆုံး ပို့စ်က ဘာများ ဖြစ်မလဲလို့ လာဖတ်ရင်း ရောက်လာခဲ့တာ...။း)